Otú nyefee Non zụrụ Music si iPod ka iTunes
iTunes bụ ndabere omume maka ịnweta na-ebufe music, photos na ndị ọzọ na faịlụ maka Apple ngwaọrụ. N'otu aka ahụ ndị ọzọ Apple ngwaọrụ, iPod na-adabere ná iTunes n'ihi na ya faịlụ Nyefee na nkwado ndabere na mpaghara dị ka ndabere. Ọtụtụ n'ime anyị emewo-agba nkịtị ka syncing na ịnweta faịlụ na anyị iPod site iTunes ihe karịrị afọ ebe iPod mbụ banyere ahịa ọtụtụ afọ gara aga. Otú ọ dị, iTunes adịghị ekwe ka ndị na-abụghị zụrụ music na songs na-enyefere anyị iPod ruru Apple banyere nchegbu nke nwebisiinka ịda iwu nke na ha nwere ikike n'ịwa uru si music na songs zụrụ iTunes.
Ya mere anyị mesịrị stuffed anyị iPods na songs anyị na-amasị ndị ọzọ ihe, n'ihi na free, anyị na-eche nsogbu nke esi na-abụghị zụrụ songs si iPod ka iTunes. Ọtụtụ n'ime unu, dị ka m, jụrụ ndị na-esonụ ajụjụ, "ga-esi na-abụghị zụrụ songs si iPod ka iTunes?"
Ọfọn, e nwere abụọ ngwọta maka a question.with anyị TunesGo omume, ị nwere ike ugbu mfe nyefee gị na-abụghị zụrụ music na songs si gị iPod ka iTunes.
Ngwọta 1. Iji aka nyefee ndị na-abụghị zụrụ music si iPod ka iTunes
Ngwọta 2. Easily Nyefee na-abụghị zụrụ music si iPod ka iTunes na TunesGo
Nke a bụ otu n'ime ụzọ nke pụrụ inyere gị nyefee gị na-abụghị zụrụ music si iPod ka iTunes. Ọ ihu ọma na-achọ ndị iPod eriri USB, gị iPod na gị onwe onye na kọmputa.
Nzọụkwụ 1 jikọọ gị iPod gị na kọmputa
Iji USB na wee na gị iPod, jikọọ gị iPod gị na kọmputa. Gị iPod ga-enwe ike igosi n'okpuru 'My Computer' window, dị ka a na-egosi n'okpuru;
Nzọụkwụ 2 Ngosipụta zoro ezo faịlụ
N'okpuru ngwaọrụ, na Windows Explorer, họrọ 'Ngwaọrụ', mgbe ahụ, 'nchekwa Nhọrọ' wee họrọ 'echiche' na mmapụta dialog. Ego 'Ngosipụta zoro faịlụ na nchekwa' na ndọpụta menu.
Nzọụkwụ 3 Detuo music faịlụ
Mgbe ị pịa imeghe gị iPod si 'My Computer' window, ị kwesịrị ị na-enwe ike ịhụ a nchekwa akpọ 'iPod _ Control'.
Mgbe ị mepee nchekwa site abụọ na ịpị ya, ị ga-ahụ ihe niile na music faịlụ na iPod nwere. Nke a bụ nchekwa na-echekwa niile music na ị mmekọrịta gị iPod. Ọ ga-ekwe ka ị idetuo niile faịlụ site a dị mfe idetuo na mado usoro. The music faịlụ na-Otú ọ dị enweghị usoro azọpụta.
Nzọụkwụ 4 Tinye na music faịlụ gị iTunes.
Ẹkedori iTunes, na iTunes menu aga Dezie, mgbe ahụ, mado, nke a ga tinye niile music faịlụ gị iTunes.
Aka iTunes idozi faịlụ na ihe n'usoro n'ụzọ, na-eme ndị na-esonụ;
Họrọ "Mmasị" nke i nwere ike ịhụ na 'Dezie "menu.
Gaa" Advanced Mmasị "site na ịpị" Advanced "abụọ nhọrọ na mkpa ka-enyocha na a nhọrọ,
Nọgidenụ na iTunes Media nchekwa haziri
Copy faịlụ ka iTunes Media nchekwa mgbe na-agbakwụnye na n'ọbá akwụkwọ.
• Ọ bụ n'efu.
• Ọ dịghị achọ ọzọ software nchịkọta ma ọ bụ ngwa.
• Ọ dị mfe na-eso mgbe i nwere ịghọta isi IT ọghọm: • Ọ na-egosiputa music enweghị usoro N'ihi ya na-eme ka ihe siere gị ike iji bulie kpọmkwem tracks i nwere ike mkpa. • Usoro nke na-egosi gị zoro ezo faịlụ nwere ike ịdị mgbagwoju anya ma ọ bụrụ na hapụrụ ka nke ahụ nwere ike ịhapụ ụfọdụ dị mkpa usoro nchekwa na kọmputa gị na-adịghị ike. • Usoro dị nnọọ kwa ogologo n'ihi na onye nwere dịghị ịghọta isi IT.
Na TunesGo, ị nwere ike ugbu a mfe nyefee gị na-abụghị zụrụ music na songs si gị iPod ka iTunes na dị nnọọ ole na ole dị mfe nzọụkwụ
Nzọụkwụ 1 Download na wụnye TunesGo
jikọọ gị iPod gị na kọmputa
Iji USB na wee na gị iPod, jikọọ gị iPod gị na kọmputa. Ẹkedori TunesGo site abụọ na ịpị ya mgbe ị rụnyere ya na kọmputa gị. TunesGo ga-enwe ike na-akpaghị aka ịchọpụta gị iPod na ọdịnaya na gị iPod haa haziri na n'aka ekpe nke onye ọrụ interface. Agbasa 'ngwaọrụ', ya mere, ị nwere ike ịnweta gị na-abụghị zụrụ music faịlụ site na gị iPod.
Nyefee ndị na-abụghị zụrụ music na songs si iPod ka iTunes.
Mgbe unu gbasara 'ngwaọrụ', gị niile na-abụghị zụrụ songs ga-egosi na n'akụkụ aka nri nke isi window nke TunesGo. Họrọ niile na-abụghị zụrụ music faịlụ na ị chọrọ nyefee iTunes si gị iPod, a nwere ike mere site na-ejide ala 'Ctrl' isi mgbe gị click na niile na-abụghị zụrụ music faịlụ na ị chọrọ nyefee iTunes. N'elu akụkụ nke isi window, pịa 'Export ka' 'Mbupụ na iTunes n'ọbá akwụkwọ' button, na gị transfer ga-amalite, dabere na ọnụ ọgụgụ nke tracks na ị na-ebufe, ọ usoro ekwesịghị oge dị ukwuu.
Mgbe mbupụ ka dechara, ị ga-ọma-agafere niile gị na-abụghị zụrụ music si gị iPod gị iTunes. Mgbe ahụ ị pụrụ ịnụ ụtọ-ege ha ntị na kọmputa gị ma ọ bụ ị nwekwara ike mmekọrịta ha gị na ngwaọrụ ndị ọzọ na-enwe-ege ha ntị na ọ laa. TunesGo enye mfe na kacha ụzọ aka ka siri ike aga-eme na gị Apple ngwaọrụ a dị mfe na ogologo-atụ ụzọ na-agaghị ọbụna imebi ngwaọrụ gị. Ọ bụkwa maka ma Windows PC na Mac
Ọzọ atụmatụ nke TunesGo
• gị zuru okè iTunes enyi
Jikwaa, achọpụta na ịkọrọ gị music na TunesGo, zuru okè iTunes enyi gam akporo na iOS.
• nyefee gị Music si gị iOS Ngwaọrụ
Ị nwere ike ugbu nyefee gị music si gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod azụ n'ime gị iTunes. Ma ị furu efu gị na kọmputa data ma ọ bụ e nyere a na ngwaọrụ na etinyegoro music, TunesGo pụrụ ịkpali gị music si gị iOS ngwaọrụ azụ n'ime gị iTunes n'ọbá akwụkwọ na kọmputa gị.
• Jiri iTunes na Android
iTunes na Android - ọnụ ke akpatre! TunesGo mgbari mgbochi nke iTunes na-ahapụ Androiders eji iTunes dị nnọọ ka ihe iOS ngwaọrụ. Mmekọrịta na nyefee gị iTunes n'ọbá akwụkwọ gị Android ngwaọrụ mfe na TunesGo.
• YouTube dị ka gị Personal Music Isi Iyi
Nanị enuba na-achọpụta na online music site ịmafe ka standalone window si tinye-na na mode.In ONE nzọụkwụ, ị nwere ike ugbu ibudata ma ọ bụ ndekọ music si YouTube na ndị ọzọ na music saịtị kpọmkwem n'ime gị iTunes n'ọbá akwụkwọ. Otu n'ime TunesGo nesest atụmatụ, bụ ablitity ka n'out oge tinye album na nkà na music mkpado gị downloads na egwú.
• Hichaa gị dum Music Library
TunesGo na-akpaghị aka nyochara na ọcha gị music n'ọbá akwụkwọ na otu Pịa. I nwekwara ike iji aka ịkpado gị music, ịgbanwe album cover nkà, ihichapụ duplicates, ma ọ bụ wepu efu tracks. iconYour music collection ugbu a mara mma haziri.
Otú nyefee faịlụ site iPod ka iTunes
All ụzọ iji weghachi iTunes n'ọbá akwụkwọ
Top 3 iTunes Ụra Ngụoge
> Resource> iTunes> otú nyefee Non zụrụ Music si iPod ka iTunes